ANTBIS စခန်းများအခကြေးငွေဇယားနှင့်အသင်းဝင်ဆောင်ရွက်မှုများ | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး07 AntalyaANTBIS စခန်းများကြေးကြေးနှင့်အသင်း ၀ င်အရောင်းအ ၀ ယ်များ
07 / 11 / 2019 Levent Elmastaş 07 Antalya, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, ဘီးစနစ်များ, တူရကီ 0
အန်တီဘီစခန်းများအခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းအစီအစဉ်နှင့်အသင်း ၀ င်အရောင်းအ ၀ ယ်များ - အပန်းဖြေခြင်းနှင့်အားကစားရည်ရွယ်ချက်များအပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်စက်ဘီးများအသုံးပြုခြင်းကိုမြှင့်တင်ရန် Antalya Metropolitan Municipality၊ ANTBIS သည် Antalya တစ်လျှောက် Bisiklet Smart Bike Sharing System ကိုတိုးချဲ့ရန် ရည်ရွယ်၍ စက်ဘီးစီးသူများအားကျန်းမာသန်စွမ်းသောသဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။
Smart Bike Sharing System ဖြင့်စက်ဘီးစီးသူများသည်သူတို့၏စက်ဘီးများကိုသယ်ဆောင်ရန်မလိုအပ်ပါ။ သူတို့သည်ANBİSဘူတာများမှစက်ဘီးများကိုငှား။ ANTBİSဘူတာတိုင်းသို့ချန်ထားနိုင်သည်။
ခရက်ဒစ်ကဒ်ပိတ်ဆို့ခြင်း £ 24
စာရင်းပေးသွင်းသူကဒ်ကြေး £ 5
အပိုဆောင်းနာရီသည် £ 2
ANTBIS Smart Bicycle System ကိုဘယ်လိုစာရင်းသွင်းရမလဲ။
သင်၏အသင်းဝင်အရောင်းအ ၀ ယ်များကို ANTBropolS Metropolitan စည်ပင်သာယာစခန်းဘေးတွင်တည်ရှိသောANTBİs Subscriber Center မှပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
ငှားရမ်းသည့်စက်ဘီးစနစ်၏အသင်းဝင်ဖြစ်ရန်သင်သည် 18 ၏အရွယ်ရောက်ပြီဖြစ်သည်။
အသင်းဝင်ကဒ်ပြားမှာ5TL ဖြစ်သည်။ အသင်း ၀ င်သည့်နေရာမှသင်၏ကဒ်သို့သင်တင်ပို့နိုင်သည်။
1. မိုဘိုင်း application နှင့်အတူ; သင်သည် ANTBIS လျှောက်လွှာတွင်ပါ ၀ င်နိုင်ပြီး၊ သင်၏အကောင့်သို့လက်ကျန်ငွေကိုတင်ပို့နိုင်ပြီးတစ်ကြိမ်တည်းသောစကားဝှက် menu မှသင်ရရှိမည့်စကားဝှက်ဖြင့်ငှားနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့စက်ဘီးကိုအပ်ရရန်, ဆိုင်ကယ်ဘေးရှိခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏တစ်ကြိမ်တည်းစကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်။ ထပ်မံရိုက်ထည့်ပါ။ သင်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုလျှပ်တစ်ပြက်အသံဖြင့်ကောက်ယူနိုင်သည်
2. Subscription Card ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Karaalioğluပန်းခြံတွင်သင်၏ကဒ်ကို Antbis Subscriber Center မှ စတင်၍ သင်ခရက်ဒစ် တင်၍ ငှားနိုင်သည်။ (KIOSK စက်ပစ္စည်းသည် Subscriber CARD မှလက်ခံရရှိခြင်းမဟုတ်ပါ)
သင့်ရဲ့စက်ဘီးကိုအပ်ရရန်, စက်ဘီးဘေးရှိသော့ခတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်သင်၏ကဒ်ကိုပွတ်ဆွဲပါ။ သင်၏စကားဝှက်ကိုရိုက်ထည့်ပြီး Enter နှိပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုကလစ်နှိပ်သံဖြင့်ကောက်ယူနိုင်သည်။
3. Credit Card ဖြင့်လည်းကောင်း၊ kiosk စက်မှတစ်ဆင့်ခရက်ဒစ်ကဒ်ဖြင့်ငှားရမ်းသည့်အခါ 24 TL သည်စက်ဘီးတစ်စီးလျှင်သင်၏ကဒ်မှပိတ်လိမ့်မည်။ သင်၏စက်ဘီးကိုသယ်ဆောင်ပြီးအသုံးပြုသည့်အခါပိတ်ထားသောငွေပမာဏနှင့်သင်အသုံးပြုသည့်နာရီနှင့်သက်ဆိုင်သောပမာဏကိုနောက်တစ်ညတွင်သင်၏ကဒ်တွင် 23.30 တွင်ထုတ်ပြန်လိမ့်မည်။ ဘဏ်များ၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကြောင့်၊ ပိတ်ဆို့ခြင်းသည် 1 နှင့် 30 ရက်အကြားကွဲပြားသည်။
သင့်ရဲ့စက်ဘီးကိုအပ်ရရန်, ဆိုင်ကယ်ဘေးရှိခလုပ်ကိုနှိပ်ပါ။ သင်၏အငှားစကားဝှက်ကို Antbis မှရိုက်ထည့်ပြီး Enter ထပ်နှိပ်ပါ။ သင်သည်သင်၏စက်ဘီးကိုကလစ်နှိပ်သံဖြင့်ကောက်ယူနိုင်သည်။
4. ကဒ်နှင့်အတူ Kent; သင်၏နာမ၌သတ်မှတ်ထားသောကိုယ်ပိုင် 18 မြို့ကဒ်များဖြင့်စက်ဘီးငှားရမ်းမီနူးမှ Antbis အသင်းဝင်အကောင့်ကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ သင်၏မြို့ကဒ်တွင်ရှိသောငွေလက်ကျန်ကိုသင်၏ antbis အကောင့်သို့လွှဲပြောင်း။ အသုံးပြုရန်စကားဝှက်ကိုငှားနိုင်သည်။
1-ANTBIS မိုဘိုင်း application နှင့်အတူ
Member menu ကိုနှိပ်ပြီး log in လုပ်ပါ။ (သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင်မမှတ်မိပါကကျွန်ုပ်၏လျှို့ဝှက်နံပါတ်ရွေးရန်မေ့သွားပါ။ ကျေးဇူးပြု၍ သင်၏ login ကို SMS မှတစ်ဆင့်ပေးပို့လိမ့်မည်)
ခရက်ဒစ်ကဒ် - တင်သောခလုတ်မီနူးမှသင်အလွယ်တကူတင်နိုင်သည်။
Install Credit menu ကိုနှိပ်ပြီးအသင်းဝင်ကိုရွေးချယ်ပါ။
သင်၏အကောင့်အချက်အလက်များကိုသင်စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့် Upload credit menu မှအလွယ်တကူ upload လုပ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ANTBIS Smart Bike System သည်လက်ရှိတွင်ဘူတာခြောက်ခုတွင်လည်ပတ်လျက်ရှိသည်။
Boğaçayıဘူတာရုံ (Akdeniz Blv ။ Erdoğan Residences ၏ရှေ့မှောက်)
Konyaaltıရင်ပြင်ဘူတာ (Akdeniz Blv နှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်။ Hilmi Kokoreç)
Olbia ဘူတာ (Dumlupinar Blv ။ Olbia ရင်ပြင်)
Variant Station (သဲသောင်ပြင်ဥယျာဉ်ဝင်ပေါက် Konyaalti သဲသောင်ပြင်အစ)
Atatürkပန်းခြံဘူတာ (Konyaaltı Cad ။ Atatürkပန်းခြံဘေးတွင်)
Off Road Station (Milli Egemenlik Cad ။ တံခါးပိတ်လမ်းပိတ် - Halk ဘဏ်၏ရှေ့မှောက်၌)
Işıklarဘူတာ (Genclik Mah ။ Fevzi Cakmak လမ်း Karaalioglu ပန်းခြံဝင်ပေါက်)
Sampi အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ရေးဘူတာ (Metin Kasapoğlu Cad ။ Beytaş Sit ။ ABC လုပ်ကွက်များ၏ရှေ့မှောက်)
Düdenပန်းခြံဘူတာ (Çağlayan Mah ။ Shelters Blv ။ Düden Park ဝင်ပေါက် - မီးသတ်ရှေ့မှောက်၌)
ANTBIS မြေပုံကိုကြည့်ရှုရန် ဒီမှာ ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ!
Nextbike Konya စမတ်စက်ဘီးစခန်းများခ…